Falanqeynta Kulanka West Bromwich Albion Vs Manchester United Ee Horyaalka Premier League
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqeynta Kulanka West Bromwich Albion Vs Manchester United ee Horyaalka Premier League
Manchester United ayaa la ciyaaridoonta kooxda West Bromwich Albion kulan ka tirsan Horyaalka Premier League iyadoo kooxda Red Devils ay mar kale isku aragtay kaalinta 3-aad ee horyaalka guul ay gaarto kulankan ayaana keeni karta in dib ugu soo laabato booskeeda hore ee labaad.
Garoonka The Hawthorns
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara West Brom Grady Diangana ayaa ku soo laabtay tababarka ka dib dhibaato muruqa ah laakiin weli diyaar uma ahan inuu soo laabto.
Saxiixa cusub ee amaahda ah Okay Yokuslu ayaa safan kara kulankiisa ugu horeeyay ka dib markii uu kulankiisii ​​ugu horeeyay ka soo muuqday kursiga keydka todobaadkii hore.
Manchester United waxaa ka maqnaan doona Paul Pogba, kaasoo dhaawac bowdada ah qaba, laakiin Eric Bailly ayaa ku soo laabtay tababarka ka dib lix kulan oo uu maqnaa waxaana laga yaabaa inuu ciyaaro.
Luke Shaw, Bruno Fernandes, Edinson Cavani iyo Scott McTominay ayaa lagu soo bilaabi karaa ka dib markii ay bedel ay ku soo galeen bartamihii isbuucaan.
West Brom ayaa laga badiyay sagaal ka mid ah 12 kulan oo Premier League ah oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Manchester United (W1, D2).
Manchester United ayaa isha ku heysa inay rikoor labo jeer ah ka sameyso Premier League West Brom markii ugu horeysay tan iyo xilli ciyaareedkii 2011-12 ee uu hogaaminayay Sir Alex Ferguson.
West Brom ayaa badisay kaliya hal kulan 13-kii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka (D3, L9).
Manchester United ayaa laga badiyay kaliya hal jeer 17 kulan oo horyaalka ah (W11, D5).